မြန်မာ - အိန္ဒိယနယ်စပ် ကလေး၊ တမူးဒေသသို့ ကွမ်းရွက် အဝင်များသော်လည်း အိန္ဒိယဘက်မှ ဝယ်ယူမှု နည်း?? - Yangon Media Group
ကလေး၊ ဇူလိုင် ၅- မြန်မာ
အိန္ဒိယနယ်စပ်ရောင်းဝယ်ရေး တမူးနှင့် ရိဒ်ဒေသတွင် အရောင်းအဝယ် အများဆုံးဖြစ်သည့် ကွမ်းရွက်များ၊ ကလေးနှင့် တမူးဒေသသို့ ဝင်ရောက်မှုများနေသော်လည်း အိန္ဒိယဘက်မှ ဝယ်ယူမှု နည်းပါး နေသောကြောင့် ကလေးမြို့နှင့် တမူးမြို့သို့ စုပုံဝင်ရောက်နေကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ကလေး၊ ချင်း တောင်၊ တမူး၊ ရိဒ်နယ်စပ်ကို က လေးမြို့ကနေတစ်ဆင့် တင်ပို့ရောင်း ချတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွမ်းရွက်က တော့ မုံရွာ၊ မန္တလေးကနေ နေ့စဉ်ဝင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရောင်းအ ဝယ် အေးတယ်။ ဝါဝင်ရာသီလည်း ဖြစ်၊ မိုးတွင်းရာသီလည်းဖြစ်တော့ အရောင်းအဝယ် အေးတယ်။ ကွမ်း သီးကတော့ အိန္ဒိယဘက်က ဝယ်ယူမှု နည်းတယ်။ အရောင်းအဝယ် အေးတယ်ဆိုတော့ သွားရေး လာ ရေး ကောင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ကလေးမြို့က ဂိုဒေါင်တွေမှာထား ကြတာများတယ်”ဟု ထူးကျော် ကွမ်းသီး၊ ကွမ်းရွက်ရောင်းဝယ် ရေးလုပ်ငန်းက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံထွက် ကွမ်းသီးနှင့် ကွမ်းရွက်ကို မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် တမူးနှင့် ရိဒ်နယ်စပ်တို့မှ အများဆုံး ဝယ်ယူမှုရှိသော်လည်း ယခုရက်ပိုင်း နယ်စပ်အရောင်းအဝယ်အေးနေသည့်အတွက် ကွမ်းသီး၊ ကွမ်းရွက်ဈေးပါ အေးနေသည်။
ကလေးမြို့တွင် မုံရွာဒေသထွက် ကွမ်းရွက်ကြီး တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃ဝဝဝ ဝန်းကျင် အ ရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီး ကွမ်းရွက်သေးတစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၃၅ဝဝ ဈေးရှိကာ ကွမ်းသီး တစ်ပိဿာလျှင် ယခုရက်ပိုင်း ကျပ် ၇ဝဝဝ ဝန်းကျင်အရောင်းအဝယ် ဖြစ်နေသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးစခန်းတွေက အခုရက်ပိုင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွမ်းသီးတင်ပို့ရောင်းချမှု ကျဆင်းနေပါတယ်။ ဇွန်လဆန်းပိုင်း တင်ပို့ရောင်းချမှုနဲ့ ဇွန်လကုန်ပိုင်း တင်ပို့ ရောင်းချမှုကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၅၅ တန် လျော့နည်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်”ဟု မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။အဆိုပါဒေသသို့ တောင်ငူ၊ မတ္တရာ၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ ရေးနှင့် ကော့သောင်းဒေသထွက် ကွမ်းသီး များပို့ဆောင်ပြီး မုံရွာနှင့် မန္တလေးမှ ကွမ်းရွက်များ တင်ပို့ကြောင်း သိရသည်။
ဆီးရီးယားတွင် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့သုံး တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အ??